Umsebenzi-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>careers
inani isikhundla Education Hayi yaBafundi
1 Umphathi wokuthumela ngaphandle Ikholeji nangaphezulu 16
1. Ukuphuhlisa ngokuzimeleyo kunye nokugcina abathengi bamanye amazwe. Uxanduva lokubonelela ngempendulo efike ngexesha elifanelekileyo kunye nonxibelelwano kwimibuzo yabathengi, kwaye ufumane iodolo.
2.Ukuba noxanduva lokulandela umkhondo nokuzalisekisa ii-odolo ezisayiniweyo kunye nokusombulula iingxaki kwinkqubo yokuphunyezwa kwesivumelwano kwangexesha. Ukuhlela iifayile ngexesha lokugqiba ikhontrakthi.
1. Ngaphezulu kweminyaka emi-5 yamava okusebenza, amandla okulawula iqela kunye namandla okwenza, akwazi ukuqhubeka nokuphucula ukusebenza komsebenzi.
2. Izakhono zokunxibelelana ezilungileyo, umsebenzi ononopheleyo nonononophelo, uvakalelo olomeleleyo loxanduva, ukuba nobuganga bokujongana noxinzelelo lomsebenzi kunye nemiceli mngeni, ube nembono yokuyila, kwaye ube nomoya olungileyo weqela.
3. Isidanga sokuqala kwi-English yorhwebo lwangaphandle, urhwebo lwamanye amazwe okanye ezinxulumene noko, ngembalelwano elungileyo yorhwebo lwangaphandle kunye nezakhono zokuthetha isiNgesi.
4. Yiba nobuchule kunxibelelwano olubhaliweyo nolomlomo kunye nabathengi bangaphandle, kwaye ube nakho ukuya phesheya ngokuzimeleyo. Unokusebenza ngobuchule kuzo zonke iintlobo zesoftware yeofisi.
Qhagamshelana nathi +
2 Umxhasi wentengiso Ikholeji nangaphezulu 16
1.Phumeza isicwangciso sokuthengisa senkampani, kubandakanya iqonga le-B2B, umboniso wamazwe aphesheya, njl.
2. Ukuhlaziywa, ukugcinwa, ukusebenza kunye nokuphakanyiswa kwewebhusayithi yenkampani.
3. Gqibezela eminye imisebenzi eyabelwe inkampani.